Isniin 18 October 2021
Barnaamijka Bandhigga VOA waxa uu todobaadkan ku saabsan yahay la-qabatinka isticmaalka baraha bulshada iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay bulshada.
Bandhiga VOA: Maxaa laga bartay doorashada Aqalka Sare?
Barnaamijka Bandhigga VOA waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorashooyinka Aqalka Sare ee Soomaaliya iyo waxyaabihii laga bartay, iyo sidoo loogu dabaqi karo doorashada Golaha Shacabka.
Bandhigga VOA: Sudan iyo qalalaasooyinka siyaasadeed
Bandhigga VOA: Khilaafka Farmaajo iyo Rooble
Barnaamijka Bandhigga VOA waxa uu toddobaadkan ku saan yahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyo sida lagu xalin karo.
Bandhigga VOA: Sanad-guuradii 20-aad ee September 11
Bishii September 11-keedii sanadkii 2001-dii, muddo haatan 20 sano ay ku buuxameyso maalinta Sabtida ah ee soo socota, waxay aheyd maalin wax weyn ka bedeshay dunida Islaamka iyo siyaasadihii reer galbeedka.
Barnaamijka Bandhigga VOA waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar ka tirsan NISA oo muddo ka badan laba bil la la’yahay, iyo warar sheegaya inay u gacan gashay Al-Shabaab.
Bandhigga VOA: Caqabadaha dhallinyarada ka haysta guurka
Bandhigga VOA: Soomaaliya iyo cayaaraha caalamiga ah
Bandhigga VOA: Ka-bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Iraq
Barnaamijka Bandhigga VOA waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay Ka-bixitaanka Ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq, xilli ay bishan ciidamada Mareykanka soo geba-gebeynayaan ka-bixitaankooda Afghanistan.
Bandhigga VOA: Soomaalida qaxootiga ku ah Eritrea
Barnaamijka Bandhigga VOA, waxa uu todobaadkan yahay xaaladda iyo nolosha Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Eritrea.
Bandhigga VOA: Qalabka korontada ku shaqeeya oo ku yaraaday Mareykanka
Bandhigga VOA: Kiisaska COVID-19 ee Afrika oo sii kordhaya
Barnaamijka Bandhiga VOA waxa uu todobaaadkan ku saabsan yahay heerka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qdaarada Afrika oo Hay’adda Caafimaadka aduunku sheegtay inay korodhay in ka badan boqolkiiba afartan (40%).